बिरालो & Mouse Mobile Slot Game -Mobile Casino Plex
बिरालो & माउस एक5रील,9मिसिन खेल payline फल उपलब्ध mFortune क्यासिनो. खेल यस्तो खैरो माउस रूपमा मजा प्रतीक समावेश, एक खैरो बिरालो, एक बिरालो र माउस पैसा झोला प्रतीक, एक चूहादान र केही चीज, साथै उच्च मूल्य खेल कार्ड. चार पुरस्कार ट्रेल्स माउस chasing बिरालो समावेश र जो तपाईं अतिरिक्त नगद जीत अनुमति जो पनि छन्. साथै, खेल जंगली प्रतीक समावेश, स्क्याटर प्रतीक, multipliers, मुक्त spins र एक Jackpot.
प्ले बिरालो & हाम्रो सिफारिस क्यासिनो मा माउस
बिरालो रूपमा & माउस एक फल मिसिन खेल हो, यसलाई कसरी खेल्न जान्न एक सरल खेल हो. रमाइलो खेल लागि महसूस प्राप्त वा कुनै समय मा विजेता सुरु गर्न वास्तविक मुद्रा को लागि खेल्न लागि खेल्न सक्छन्. खेल सुरु गर्न तपाईं जो रूपमा 10p रूपमा कम हुन सक्छ बाजी थाप्न सक्नुहुन्छ.
माउस जंगली प्रतीक कुनै पनि अन्य प्रतीकहरू लागि विकल्प जो, को स्क्याटर प्रतीक वा एक विजेता संयोजन पूरा गर्न बोनस खेल प्रतीक बाहेक.
बिरालो को स्क्याटर प्रतीक हो. तपाईं एक लाइन मा तीन या अधिक स्क्याटर प्रतीक स्पिन भने तपाईं नि: शुल्क spins सम्मानित गरिनेछ.
बिरालो र माउस पैसा बैग Jackpot प्रतीक हो र तपाईं एउटा सक्रिय payline यी पाँच स्पिन भने, तपाईं सम्पूर्ण Jackpot सम्मानित गरिनेछ.
तपाईं एउटा सक्रिय payline दुई वा बढी माउस छेद स्पिन भने, तपाईं बोनस खेल प्रविष्ट हुनेछ. तपाईं माउस र एक बिरालो संग एक खेल बोर्ड गर्न पहल गरिनेछ. तपाईं बिरालो को माउस अगाडि राख्न प्रयास मा पासाघुमाउनुहोस् गर्न आवश्यक हुनेछ. के तपाईं माउस बिरालो को अगाडि राख्न व्यवस्थापन तपाईं भूमि वर्गहरूको र समय को लम्बाइ अनुसार जीत हुनेछ. तपाईंले यो खेल मा ठूलो पेआउट जित्न सक्छौं.